Ngendlela efanelekileyo ukugxininisa kwinqeni?
Bonke abesifazana baphupha ngeenqanawa ze-aspen, ezikhangela kwi-femin figure ekubongeni izibuko zamadoda. Kodwa ukugxininisa kwinqeni kunzima ngokwaneleyo -kubonga ngokukhethekileyo kweengubo. "Okugqithiseleyo" kunokusebenzisa uncedo lokudonsa i-corsets, elinceda ukuba libukeke lincinci, kunjalo, linika amaninzi amaninzi ezintle kwi-sock. Kodwa asiyi kuthetha malunga neendlela ezimbi zokugxininisa ngokucacileyo inqeni.
Ukubala nokudweba kweengubo. Unqwenela ukugxininisa isibalo, sincoma ukunikela ingqalelo kumbala nokudweba kwento. Unqwenela into engumntu womzingeli, ukuba kukho umnqweno wokubukeka wenze ulunci lube luncinci. Efanelekileyo kakhulu kule njongo yimibala emnyama ephakamisa umgca wendlela. Nangona kunjalo, ungayishiyi ngokupheleleyo into ephethe umfanekiso, nje ukhangele ngokukhawuleza ukhetho lwabo. Ngokomzekelo, amacwecwe amacandelo kummandla welizwe anemiphumo embi.
Gxininisa kumzimba ophezulu. Ukuba ufuna ukugxininisa inqabileyo, sebenzisa ubuchule bokugxininisa kwinqutyana yomzimba, ngasemva apho naluphi na unqeni oluya kubonakala luncinci. Ngokomzekelo, esi siphumo singenziwa ngokubonga kwimigxa yamagxa, ukucutha okunzulu, iifonti kwijacket. Ngaloo gimmick, ungasebenzisa enye inkohliso elula: amabini amabini okanye amaqhosha amathathu angakhange ahlaselwe phezulu kwe-blouse. Le ndlela ayikwazi nje ukutsala ingqalelo kwisifuba, kodwa iphinda ibonakale ikhulisa umthamo ophezulu, ngenxa yokuba i-automation ilahlekelwa ngamangentimitha.
Iibhande kunye namabhande. Ibhande okanye ibhanti yindlela enkulu yokugxininisa inqabileyo, kodwa ukuba ikhona, kwaye kungekhona xa uzama ukuyidala. Uninzi lwabasetyhini abaneenhlobo eziluhlaza, ngokukhawuleza ukudonsa umlenze ngebhanti, ekugqibeleni ufumana umphumo ochaseneyo - unamathela kwiisisu. Abafazi abanomdla ukugxininisa umgca wokhuni kwaye bayisebenzise ekunakaleni ukuba banelungelo lokusebenzisa ibhanti elincinci, kuvumelekile nokuba nelizwi elikhanyayo. Ukuba unqeni lwakho lincinci, kodwa ufuna ukuligxininisa, kungcono ukusebenzisa ibhande elibanzi. Ngokomzekelo, isisombululo esipheleleyo siya kuba ngumkhono wesikhafu.
IiJebethi kunye neebhatyi. Ekudaleni i-femhouine silhouette iya kunceda iigebethi kunye neebhatyi. Kubalulekile ukunyamekela ukuba i-groove yayisendaweni yazo, ngoko unako ukwandisa umphumo wokudonsa. Kwaye iinqayi kunye neengubo ezingcolileyo ziyinqumle, kuyinqweneleka ukuba ungagqoki, kuba zenza i-blue girhouette.
I-top edibeneyo inxulumene nezantsi. Ngokutsho kwabaseclisti, ukudibanisa kwiphakamiso ephezulu eline-A enomxholo ngokugqithisileyo kugxininisa okhalweni. Ngokomzekelo, isisombululo esipheleleyo siya kuba ngumkhonto osikwe phezulu ungaphaya kwamadolo. Ukugxininisa ngokugqithisileyo isibalo siphezulu sepenciliti ephezulu, ngokukodwa indawo eyabelwe ngokuncediswa kwintambo. Ukuba unomlenze omncinci, ngoko unokukhetha umkhonto ngezinga eliphantsi. Ukuze i-Kslov ixelele, ukuhla kwehla okuncinci kukugxininisa umfanekiso kunye neebhulukwe. Kubalulekile, nangona kunjalo, ukuba amabhulu afaneleke kakuhle kumfanekiso kwaye akayi kudala i-foldgy folds. Isiphumo esiphezulu slenderness sinokufezekiswa ngeebhulukhwe ezifihla inxalenye yezihlangu. Kule meko, akusiyo kuphela i-silhouette eya kubonwa, kodwa nayo imilenze.
Zokugqoka. Iingubo ezigqoke ziza kuphakamisa isibalo ngasinye. Uhlobo olulungileyo - imodeli kwisitayela sobukhosi kunye kunye namaqhekeza kwindawo yamathanga, esifubeni.
I sweater. Indlela ephezulu yokugxininisa isimboli esifanelekileyo i-sweater enebhola yerabha. Musa ukuthenga i-baggy kunye ne-sweaters. Musa ukugqoka i-cardigan ngeentambo ezibanzi kummandla wezandla kunye nesisu - ziyakwazi ukuzalisa le mimandla.
Ngokuphathelele ukhetho lwezinto ezibonakalayo, kuyimfuneko ukuba ukhethe izinto eziphathekayo okanye iifom efanelekileyo. Izinto ziya kulungeleka ngokukhululekile, kodwa ziphinda ziphinde ziphindwe.
Umbala we-Orange kwimpahla
Iimfihlelo zeenkwenkwezi "zeenkwenkwezi" ze "ezingezizo iinkwenkwezi" zoluntu
Leggings: nento enxibayo?
Indlela yokubopha i-tippet kwisibhenge
Isitayela samaGothi eLolita
Indlela yamaGrike kwiingubo
Yintoni inxiba ibhinqa ngomhla wokuqala - khetha imibala
Umququ ngee cherry kunye neendwangu
Isaladi kwi-curgettes kunye namantongomane
I-Recipe ye-Shepard Pie
Iingonyama: i-horoscope ekwindla ka-2013
I-pancake esebenzayo kunye nefritter yeetafile zeentsuku zezingane
Ingaphakathi kwindlela yaseVenice
Ezilishumi zeenkwenkwezi ezishisayo kwiHollywood
Yintoni yokwenza i jeans endala?
Indlela yokwenza i-terrarium ngezandla zakho
Izinwele ezilumkileyo zentsimbi: zikhetho ezimbalwa ezikhethiweyo
I-endometriosis yesibini kunye nonyango
Ngaba imbono ingakwazi ukuhlambalaza ngesiseko seentlanzi?
Amber puree "iVitamin Storehouse"
Ukhetho ebomini luyinkimbinkimbi